Iphikisa ubuholi beSilo uMisuzulu iNdlovukazi - Ilanga News
Home Izindaba Iphikisa ubuholi beSilo uMisuzulu iNdlovukazi
Iphikisa ubuholi beSilo uMisuzulu iNdlovukazi
* UNdlunkulu uSibongile nabaNtwana bafuna luxazululwe enkantolo olwamafa
Yindlovukazi uSibongile Winnifred Zulu.
IGCIZELELA ukuthi izoqhubeka nokuyilwa ngenkantolo eyokucazwa kwamafa eSilo uZwelithini ka-Bhekuzulu indlunkulu yokuqala yaKwaKhethomthandayo yeNdlovukazi uSibongile Winnifred Zulu olibeka ngesihloko elokuthi nguyena inkosikazi esemthethweni ye-Mbube ekhothame ngoNdasa (March) nonyaka.
Lokhu indlunkulu yaKwaKhetha ikuveze esitatimendeni esicacisa ngemibiko eke ya-sabalala yokuthi seyiluhoxisile lolu daba enkantolo. Le mibiko isabalale ngemuva ko-kukhothama kweNdlovukazi uShiyiwe Mantfombi Zulu uMaDlamini obeyiBamba lobukhosi bukaZulu emuva kokukhothama kukaBayede.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngomhla ka-3 kwephezulu, ILANGA libike ngokufakwa kwa-maphepha enkantolo lapho uNdlunkulu uSibongile ecela ukuthi kube nguyena ocacisa ngamalungelo akhe njengenkosikazi eshade ngokusemthethweni neSilo uZwelithini. Kula maphepha ukubeke kwacaca ukuthi njengoba yena neNgonyama, babeshade umshado ohlanganisa amafa, ukubona kumfanele ukuthi emafeni eSilo ahlomule ngohhafu.
Bafuna kuvinjwe uhulumeni ukuvumelana nesinqumo
INdlovukazi uSibongile kula maphepha afa-kwe ngenyanga edlule eNkantolo ePhakeme yaseMgungundlovu, ithi ngokwazi kwayo yi-yona ebishade neSilo ngaphansi komthetho iMarriage Act, No 25 of 1961. Ithi ngokuqo-nda kwayo kusho ukuthi umshado wabo uhlanganisa amafa. Ithi lokhu kusho ukuthi yiyo okumele yengamele izindaba seSilo esesikhotheme.
Iqhuba ithi icela inkantolo igunyaze ukumiswa kokuthi kuqhutshekwe nokuqokwa kweBamba lobukhosi kulo mbuso wakwaZulu, njengoba ithi inezizathu ezinqala ezenza ikuphikise ukubekwa kwalo.
Ithi icela ukuba inkantolo imise amalungu omndeni weSilo ahlanganisa uMntwana uThembi Ndlovu, uMntwana Mbonisi Zulu, uMntwana Thulani Zulu, uMntwana Lindi Zulu, uMntwana Vulindlela Zulu, uMntwana Mxolisi Zulu, uMntwana Mathuba Zulu, uMntwana Mayvis Zungu nawo wonke amalu-ngu alo mndeni ukuba athi avumelane noma ahambisana kumbe aphimise ukuthi iNdlovukazi yaKwaKhangelamankengane ekhothe-me, ibiyibambabukhosi noma yiyona elandele ukuqhwakela isihlalo sokukhosi bakwaZulu njengeSilo samaZulu.
Kula maphepha iphinde yaveza ukuthi ifisa inkantolo ivimbe uhulumeni waseNingizimu Afrika noKwaZulu-Natal ukuba bavu-melane nesinqumo sokubekwa kweNdlovukazi ekhotheme njengeBamba ekubeni inga-kalungiswa indaba yencwadi yamafa engaha-mbisani nayo.
Ukungena kwecala kuphazanyiswe
wukukhothama kweBamba uMantfombi
Kula maphepha iNdlovukazi uSibongile
inxusa inkantolo ukuba iphoqe ihhovisi lika-Ndunankulu waKwaZulu-Natal ukuba linike abammeli bayo uhlu uma lukhona lwamalu-ngu omndeni wesilo olusayiniwe, lusayinwa yiSilo esikhotheme njengoba kusho umthe-tho obhalwe kwiRoyal Household Trust Act.
Kulesi sitatimende iNdlovukazi uSibongi-le iphinde icacise ukuthi amaphepha afikile ezandleni zalabo abathintekayo ngosuku olu-ngaphambi kwalolo okukhothame ngalo
iNdlovukazi ebeyibambile, uMantfombi, lo-kuthi kumele babe senkantolo ngomhla ka-7 kuNhlaba (May). Nokho lokhu kakubange ku-senzeka ngenxa yokukhothama kwendlovukazi uMantfombi njengoba itshalwe ngalo lolu suku lomhla ka-7.
“Udaba lusesenkantolo kalukaze lusulwe futhi silindele ukuthi luhlale maduzane,” kusho isitatimende.
AbaNtwana ababili beNdlovukazi
uSibongile bayameseka unina
Kakuyona incwadi yeNdlovukazi uSibongile kuphela esenkantolo kodwa neyamadodakazi ayo abaNtwana uNtandoyenkosi Zulu no-Ntombizosuthu Zulu-Duma nabo bafake incwadi enkantolo becela ukuba ingenelele odabeni lwencwadi yamafa kayise, bekhala ngokuthi indlela asayina ngayo kayifani, ku-solakala sengathi encwadini okuthiwa ngeya-mafa kwasayina omunye umuntu.
Laba baveze ukuthi ngokongoti wezoku-bhala, ukuqinisekisile ukuthi indlela uyise wabo (iSilo) abesayina ngayo kayifani ne-ndlela okusayinwe ngayo kule ncwadi yamafa.
Emaphepheni asenkantolo banxusa ukuba ingenelele imise uMnu Jerome Ngwenya ekutheni alandelele imithetho ebhalwe kule ncwadi abathi kuningi abangakwethembi ngayo njengoba bethi ngisho inombolo kama-zisi yalowo le ncwadi ethi kumele ubukhosi bugcine ezandleni zakhe, ibhalwe sakuxikizwa.
Laba bathi bacela inkantolo ingenelele ngoba kuyimanje unina iNdlovukazi uSibongile, ufake incwadi kuyona inkantolo ukuba icacise ngamalungelo akhe njengenkosikazi esemthethweni.
Bathi kakulandelwangwa imigudu efanele ngobekiwe
“Kwesicela inkantolo ikuzwe ngokushesha wukuthi kungani inombolo kamazisi yalowo okuthiwa nguyena oqokelwe ukuba abe yisilo uMntwana SM Zulu (okunguMntwana Misuzulu), kubonakala ixikiziwe. Nalapho ixikizwe khona kabekho abantu abasayinile ukuthi yaxikizwa bekhona ukuba ngofakazi. Sicela inkantolo iqoke ungoti ozobheka ukuthi kungabe nguye ngempela yini ubaba owa-sayina le ncwadi yamafa.
“INdlunkulu ibambisene futhi ilindele ukuba lolu daba luxazululwe ezinkantolo ukuze kutholakale isixazululo ngencwadi yefa yeSilo esisanda kukhothama. Sizimisele ngokweseka lowo onikwe isihlabo sobukhosi uma nje kulandelwe imigudu efanele ngesi-khathi kwenziwa lokho. Lona obekiwe esihlalweni njengamanje kakulandelwanga imi-gudu efanele,” kusho isitatimende.
UMntwana uThulani Zulu ethintwa yiLANGA ngalolu daba, uthe akazi lutho ngala maphe-pha asenkantolo.
“Kangazi nokuthi ngingaphawula ngithini ngoba phela nawe uyazibonela ukuthi nami igama lami likhona lapho okusho ukuthi nami ngiboshiwe,” kusho uMntwana uThulani ngezwi eliphansi.
ILANGA limzame amahlanda amaningi uMnu Ngwenya ocingweni lwakhe kodwa engalubambi ucingo.
Phambilini iSunday Times, yabika ukuthi uMnu Ngwenya wathi kungaba wusuku olubi kakhulu uma kungathi isizwe sakwaZulu si-zilile ngokukhothama kweBambabukhosi kodwa umndeni ube uyisana ezinkantolo.
“Ngaphandle nje ngokungabaza ngizophi-kisana nanoma yisiphi isinyathelo engitha-thelwa sona kanjalo ngizophinde ngiphikisa-ne nanoma yisiphi isinqumo esizama ukubu-kela phansi obekufunwa yiSilo,” kucashu-nwa uMnu Ngwenya.
Waqhuba wathi uma lesi sicelo esifakwe enkantolo, isivuma, kuyosho ukuthi abaningi abancike ekondliweni yiSilo ngokuba ngamalungu omndeni waso abazoba senkingeni ngesikhathi lolu daba lusesenkantolo.
Previous articleKusamisiwe ukungenelela kukahulumeni endlunkulu kazulu
Next articleUHunt ubonga abalandeli